फाइदा चिसो र हाइअल्टिच्युडको- १३औं साग खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
फाइदा चिसो र हाइअल्टिच्युडको
मंसिर २४, २०७६ विनोद पाण्डे, हिमेश
काठमाडौँ — १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा सहभागी हुन आउने टोलीको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विशेष डेस्क व्यवस्था गरिएको छ । अतिथि सत्कार समितिका सदस्य राजन खत्री यही डेस्कको छेउमा बसेर सागमा आएका खेलाडी तथा अतिथिलाई स्वागत गर्दै गलामा मफलर (गलबन्दी) लगाई स्वागत गर्छन् ।
सागको समापन समारोह आइसक्दा पनि खत्रीको यो दैनिक जारी छ । अतिथिहरू काठमाडौं ओर्लिनेक्रम जारी छ । खत्रीले लगाइदिएको गलबन्दीले भने सहभागी हुन आएका खेलाडी तथा अफिसियलका लागि ज्यान भरेको छ । काठमाडौंमा मंसिरको चिसो छल्न त्यही गलबन्दीले कान र टाउको बेरेर सागमा चुनौती तेर्स्याउन खोजिरहेका छन् ।
सागमा प्रतिस्पर्धामा रहेका ७ मध्ये ५ राष्ट्रसामु एउटा प्रमुख समस्या काठमाडौंको चिसो झेल्नु र हाइअल्टिच्युडमा खेल्नु रह्यो । काठमाडौंको अहिलेको तापक्रम न्यूनतम ७ र अधिकतम १४ डिग्री सेल्सियस छ । भुटानको राजधानी थिम्पुको अहिलेको स्थितिमा न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस छ । बंगलादेशको ढाकाको न्यूनतम तापक्रम २२, कोलम्बोको २६, भारतको दिल्लीको १६ र माल्दिभ्सको २८ डिग्री सेल्सियस छ ।
समुद्री सतहबाट काठमाडौं १४ सय मिटर उचाइमा छ । श्रीलंका ४ सयदेखि ५ सय मिटर, भारतको दिल्ली २ सय मिटर, ढाका ४ मिटर र माले १.५ मिटर समुद्री सतहबाट माथि छन् । थिम्पु २२ सय मिटर माथि छ । मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि नै नेपाल र भुटानबाहेक राष्ट्रका खेलाडीलाई चिसो र हाइअल्टिच्युडले पिरोलिसकेको हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म साग इतिहासमै सबैभन्दा बढी स्वर्ण जित्नुको कारण यही भएको आरोप लगाउने पनि छन् ।
‘अहिले यहाँ चिसोको समय छ, त्यसले हामीलाई केही समस्या भएको छ । हाम्रा खेलाडीलाई यसले समस्या दिएको छ, हामी यसमा अवस्था हेरेर भिज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । गर्मीको मौसममा खेलाउनु नै हाम्रा लागि उत्तम हुन्छ । अरू व्यवस्थापन नेपालको ठिकै छ,’ बंगलादेश जुडो महासंघका महासचिव एकेएम सलिमले कान्तिपुरसँग भने । उनी बंगलादेश जुडो टोलीका व्यवस्थापक पनि हुन् । नेपालले यसअघि सन् १९८४ र १९९९ मा गरेको दुवै साफ असोज महिनामा गरिएको थियो । पौडी खुला पोखरीमा भएको थियो । यसपालि सागकै लागि भनेर बनाइएको हिटिङ सिस्टममा पौडी खेल आयोजना भयो ।
एथलेटिक्समा श्रीलंका सागमा धेरै बलियो रहेको छ । यसमा पाएको पदकले श्रीलंकालाई बेलाबखत सागको पदकतालिकामा दोस्रो स्थानमा उभ्याउने गरेको छ । श्रीलंकाली एथलेटिक्स टिमका प्रमुख प्रशिक्षक वाइके कुलरत्नेले हाइअल्टिच्युड र चिसो मौसमले गर्दा आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शन प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले यस्तो हुने अपेक्षा गरेका पनि थियौं, त्यसैले काठमाडौं आउनु अगाडि श्रीलंकामा हाइअल्टिच्युड अभ्यास गरेका थियौं । तर यही कारण हाम्रो प्रदर्शन सोचेजस्तो हुन सकेन ।’
श्रीलंकाका प्रदीप धाम्मिका २ घण्टा २८ मिनेट ४३ सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गरेपछि ट्र्याकमा ढल्न पुगेका थिए । हाइअल्टिच्युड भएपछि दौड पूरा गर्दा उनको शरीर सेतो भएजस्तो देखिन्थ्यो । उनलाई रंगशालाको ट्र्याकमा घाममा राखेर उपचार गरिएको थियो । श्रीलंकाली खेलाडीले यसअघिका सागका १२ मध्ये ६ पटक म्याराथनमा स्वर्ण जितेका थिए । तर १३ औं सागमा न त धाम्मिका न त सिसिरा कुमाराले किरणसिंह बोगटीको स्वर्णमा चुनौती दिन सके । जबकि किरण नेपालको म्याराथनमा तेस्रो रोजाइका धावक हुन् । यससँगै नेपालले पनि साग म्याराथन ६ पटक जित्ने श्रीलंकाको कीर्तिमान बराबरी गरेको छ ।
सार्क राष्ट्रको अरू देशभन्दा नेपाल र भुटानमा आएर खेल्नु निकै फरक रहेको राष्ट्रिय टिम तयारीमा प्राविधिक विशेषज्ञ सुशील नरसिंह राणा बताउँछन् । ‘हाइअल्टिच्युड र चिसो मौसमा खेल्दा इन्डोरेन्स इभेन्टमा धेरै फरक पर्छ, लामो दौडमा विशेषगरी । मार्सल आर्ट्समा ३ मिनेट खेल्नु भनेको ८ सयदेखि १५ सय मिटर दौडिएबराबर हो,’ राणाले भने, ‘चिसोमा खेल्न झनै गाह्रो हुन्छ । राम्रोसँग वार्मअप पनि भइसकेको हुँदैन । फुल इफोर्ट दिएर खेल्दा ल्याकटिक एसिड ह्वात्तै माथि जान्छ । त्यो हुँदा मसल्स भारी हुने र स्वाँ–स्वाँ बढी हुन्छ ।’
उनले सन्तोषी श्रेष्ठको १० हजार मिटर दौडको सफलता र भुटानको फुटबल फाइनल यात्रालाई चिसो मौसम र हाइअल्टिच्युडसँग जोडे । सन्तोषीको स्वर्ण नेपालको ट्र्याक एन्ड फिल्डमा पहिलो थियो । नेपालसँग ४–० ले पराजित भएको भुटानले बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई पराजित गर्दै दुर्लभ नतिजा निकालेको थियो । श्रीलंकालाई अन्तिम खेलमा ३–० ले पराजित गरेपछि भुटानले पहिलो पटक साग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेर धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । नेपालले ४९ स्वर्ण जितिसकेको छ । साग इतिहासमै नेपालले एकै संस्करणमा अहिलेसम्मकै बढी स्वर्ण जितेको हो ।
‘सन्तोषीसँग श्रीलंकाली खेलाडी सँगसँगै रहेर खेल्न खोजिन् । उनीहरू हामीभन्दा राम्रो हुन् । श्रीलंकाको समस्या त्यही भयो । सन्तोषी घरेलु स्थितिमा जस्तै पनि खेल्न सक्थिन्, तर श्रीलंकाली खेलाडी सक्दिन थिइन् । त्यसैले श्रीलंकाले बिस्तारै मात्र खेल्न थाल्यो । शरीर तातेपछि मात्र आफ्नो पूर्ण स्पिडमा खेल्यो । तर यो म्याराथनमा लागू हुँदैनथ्यो । किरणले सुरुआतमै उनलाई डेढ किलोमिटर जस्तो पछाडि पारेका थिए,’ राखेपका एथलेटिक्सका पूर्वमुख्य प्रशिक्षक राणाले भने, ‘फुटबलमा पनि यो लागू हुन्छ । भुटानको सफलताको एउटा कारण यो पनि हो । यहाँको चिसोले उनीहरूलाई असर गरेको छैन, थिम्पुको भन्दा तलको अल्टिच्युडमा खेल्न पाएका छन् ।’ चिसो र हाइअल्टिच्युड दुवैको फाइदा नेपालले उठाइरहेको र त्यो पदक तालिकामा देखिएको उनी स्वीकार्छन् ।
माल्दिभ्सका फुटबल प्रशिक्षक पिटर सेरगटले आफ्ना खेलाडी व्यावसायिक भएको र तिनको प्रदर्शन खराब हुनुमा हाइअल्टिच्युड र चिसो मौसमलाई दोष दिन नमिल्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘कसैले पनि खेल क्षेत्रमा राम्रो, नराम्रो प्रदर्शनका लागि यसलाई कारण मान्न हुन्न । खेलाडीले आफूलाई त्यही अनुकूल ढाल्नुपर्छ ।’
चार दिनमा आफ्नो टोलीले तीन खेल खेल्नुपरेकाले टाइसिटलाई लिएर उनी आयोजकप्रति रोष प्रकट गरिरहेका थिए । राउन्ड रोबिनमा अन्तिम खेल खेल्नुअगाडि माल्दिभ्सले कुनै खेल जित्न सकिरहेको थिएन । नेपालसँग अन्तिम खेलमा २–१ ले हारेर पदकविहीन भएपछि सेरगट बर्खास्तगीमा परिसकेका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:१९
१३ औं साग : पुरानै नेपाल र सुधारिएको भुटान
मंसिर २४, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — भुटानी फुटबलले प्रगति गरेको छ भनेर धेरै सुन्न पाइन्छ अचेल । यस्तो नहुँदो हो त भुटान १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को पुरुष फुटबलको फाइनल पुग्ने पनि थिएन । प्रतियोगिता सुरु हुनुअगाडि बिरलैले मात्र सोचेका थिए होला, नेपाल फाइनल त पुग्नेछ । तर उपाधि भिडन्तमा टिमको प्रतिद्वन्द्वी भुटान हुन्छ भनेर । यसपल्टको साग फुटबलले दिएको सबैभन्दा गज्जब, तर उत्तिकै रोमाञ्चक आश्चर्य हो यो ।
यसमा भुटानी फुटबललाई उसले पाउनुपर्ने श्रेय पनि दिर्नैपर्छ । केही वर्ष भयो, भुटानले केही समयको अन्तरमा यस्तै सम्झनलायक जित निकाल्न थालेको । अहिले यही सुरुआतले एउटा राम्रो गन्तव्य लिएको छ । यो मंगलबार हुने स्वर्ण पदकको भिडन्त नै हो । अहिले जति खेलाडीले भुटानी टिमबाट खेलिरहेका छन्, ती सबै त्यहाँकै एकेडेमीका उत्पादन हुन् । जस्तै, चेन्चो ग्याल्चेन । अहिले यिनै खेलाडी आफ्नो खेलजीवनको सबैभन्दा ठूलो स्वप्निल उडानमा छन् ।
भुटानी प्रशिक्षक पेमा आफैंले पनि भनेका छन्, ‘अहिले भुटानी फुटबल आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा खुसीको समयबाट गुज्रिरहेको छ ।’ पछिल्लो समय भुटानले नेपाली फुटबललाई गुन पनि लगाएको छ, विश्वकप छनोटमा नेपाल र कुवेतबीचको खेल थिम्पुमा खेलाउन दिएर । दशरथ रंगशाला समयमै तयार नभएपछि नेपालले थिम्पुलाई आफ्नो घरेलु मैदानका रूपमा उपयोग गरेको थियो । जुन दिन खेल भएको थियो, भुटानी फुटबलप्रेमी नेपाली समर्थक भएर मैदानमा उत्रेका थिए ।
समय : १५ बजे
त्यही फुटबलप्रेमी भुटानीको हूलमा एक थिए, प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ । आममान्छेले जस्तै उनले टिकट किने र साधारण प्यारापिटमा बसेर खेले हेरे । रंगशालासम्म पनि उनी साइकल चढेर आएका रहेछन् । अझ खेल सकिएको साँझ त गज्जब नै भयो । यिनै प्रधानमन्त्री छिरिङ बिना पूर्वसूचना नेपाली टिम रहेको होटलमा आए र नेपाली खेलाडीले राम्रो खेल्यौ भनेर खुलेर प्रशंसा गरे । एउटा देशका रूपमा भुटान फेरिएको छ । फेरिएको छ भुटानी फुटबल पनि ।
कुनै दिन त्यस्तो पनि थियो, जति बेला नेपालले भुटानी फुटबलका लागि गुन लगाएको थियो । भुटानलाई फिफा र एएफसीमा सदस्य दिलाउन डटेर लागेको थियो नेपाल । अनि कुनै समय यस्तो पनि थियो, जतिबेला नेपालमा भुटानको थिम्पु ११ ले तहल्का मच्चाउने गरेको थियो । बर्थडे कपका पाँच संस्करणमा यो थिम्पु टिम फाइनल पुगेको ०३४ देखि ०३८ बीच । त्यसमध्ये ०३६ र ०३७ सालमा यो टिमले उपाधि पनि जित्यो ।
यी सबै फाइनलमा थिम्पुको प्रतिद्वन्द्वी एउटै थियो, पुलिस क्लब । त्यो बेलाको फुटबल हेरेका र सुनेका सबैमाझ अझै पनि केही खेलाडीको नाम सम्झनामा हुनुपर्छ । जस्तो, खरे बस्नेत, उर्गेन लामा, अभय गुरुङ, सोनाम टोप्के, केबी गुरुङ र प्रेम दोर्जे । गुरुङ त अनुराधा कोइरालाका दाइ नै हुन् । त्यतिबेलाको टिम पूर्णतः भुटानकै थिएन, तर यसले भुटानी फुटबलका स्वाद र गुण बोकेको थियो । बस्नेत त भुटानी नै हुन्, खुबै राम्रा स्ट्राइकर थिए । उनले लामै समय भुटानी फुटबलको नेतृत्वमा रहे ।
यी त भए, सबै इतिहासका प्रसंग । जति–जति बेला नेपाल र भुटान फुटबल मैदानमा ओर्लने गर्छन्, त्यतिबेला नतिजा प्रभावित पार्ने एकमात्र तत्त्व भनेको यही हो, इतिहास नै । नेपाली फुटबलले राष्ट्रिय टिमदेखि कुनै पनि उमेर समूहको फुटबलमा अहिलेसम्म हार बेहोर्नुपरेको छैन, एकाध अपवाद छाडेर । त्यसै कारण त हो, पाँच टिम सम्मिलित टिममा भुटानले मज्जाको जित निकाल्न सक्यो । जस्तो, बंगलादेशलाई १–०, माल्दिभ्सलाई २–१ र श्रीलंकालाई ३–० ।
यी नतिजा कुनै पनि ‘फ्लुक’ थिएनन् । तर यतिको खेल्न सक्ने भुटान भने नेपालविरुद्धको खेलमा ४–० ले उत्तिकै मज्जाले पराजित रह्यो । साँचो हो, नेपालले भुटान भनेपछि राम्रो गर्छ । भुटानले नेपाल भनेपछि आत्तिएर दबाबमा खेल्ने गर्छ । यसलाई भुटानी फुटबलले तोड्न नसकेको ‘जिंक’ भन्दा हुन्छ । फेरि प्रतियोगिता नेपाल नै यस्तो एकमात्र टिम रह्यो, जसले कुनै पनि खेल गुमाएन । त्यसैले प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन खुबै आत्मविश्वास भएर भनिरहेका छन्, ‘स्वर्ण जित्ने हामी नै हौं ।’
खासमा भुटान सुधारिएको त छ, तर नेपाल त पुरानै हो । नेपालले खाली बंगलादेशविरुद्धको खेलअगाडि नै फाइनल पुग्यो भनेर गलत हिसाब गर्‍यो । सुनिन्छ, बंगलादेशविरुद्धको खेल अगाडि प्रशिक्षक महर्जन र व्यवस्थापन आफ्ना प्रमुख खेलाडीलाई आराम दिने सोचमा थियो । खेलाडी सबै हल्का ‘मुड’ मा थिए । धन्न, मैदानमा नेपालले बंगलादेशलाई हराउन सक्यो । त्यही खेलपछि बंगलादेशी प्रशिक्षक जेम्स डेलाई सोधिएको थियो, फाइनलमा जित्ने टिम को हो त ? नेपाल कि भुटान ?
उनले सटीक विश्लेषण गरे । जे हो, ठ्याक्कै त्यही बोले । उनले भनेका थिए, ‘फाइनलमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सबैले बुझ्नुपर्छ, अब भुटान पहिलको टिम रहेन । राम्रो छ । त्यसैले यसले नेपालबाहेक सबैलाई हराउन सक्यो । नेपाल पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ । भुटानको तुलनामा नेपाली टिमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै खेलाडी प्राविधिक रूपमा अब्बल छन् । मेरो विचारमा यसैले खेलले निर्णय गर्नेछ । पक्कै पनि नेपाल नै बलियो दाबेदार हो, फेरि यसलाई घरेलु दर्शकको साथ पनि हुनेछ ।’
भुटानी प्रशिक्षक पेमालाई डर पनि यही दर्शकको हो । खुबै भलाद्मी देखिने यी पेमाले सोझो पारामा भनेका पनि छन्, ‘नेपाल फाइनल नपुगेको भए ती सबै समर्थक हाम्रै हुन्थे कि ?’ हुन पनि भुटानले खेलेका प्रत्येक खेलमा टिमको समर्थन गर्ने नेपाली फुटबलप्रेमी नै हुन् । यो देखेर प्रशिक्षकदेखि खेलाडी सबै खुबै आभारी छन् । तय छ, नेपाल नै स्वर्ण पदकका लागि बलियो प्रत्याशी हो । टिमको सफलता सबै नेपाली फुटबलप्रेमीलाई अपार खुसी दिनेछ । तय के पनि छ भने भुटान हारेमा यी फुटबलप्रेमीलाई दुःख पनि हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:१५